မန်ယူကို အကြီးကြီးထင်ပီး အချီကြီး ဂျင်းထည့်ဖို့ ဖိအားပေးနေတဲ့ စပါး – FBV SPORT NEWS
July 9, 2021 By admin Sports News
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ ဒေါ့မွန်အသင်းက တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားဆန်ချိုကို ပေါင် ၇၃သန်းနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းကို အကြီးကြီးအထင်ကြီးနေပုံရတဲ့ စပါးက သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှူးကိန်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စစကားစလာတယ်လို့သိရပါတယ်။
လက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟယ်ရီကိန်းကို မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အနေနဲ့ အပြောင်းအရွေ့ဖြစ်မြောက်ချင်ရင် စဉ်းစားလို့ရအောင် စပါးဘက်က ယူနိက်တက်ဘက်ကို စကားကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
Football Insiderရဲ့အဆိုအရ စပါးအသင်းဟာ ဂိုးသွင်းဘုရင် ဟယ်ရီကိန်းကို မန်ချက်စတာ ယူနိက်တက်အနေနဲ့ ပေါင်သန်း၁၀၀+ပွဲထွက်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ၂ယောက်အလိုက်ပေးရန် တွန်းအားပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။
သတင်းမှာ first-teamကကြယ်ပွင့် ၂ယောက်ဘယ်သူဆိုတာကိုမဖော်ပြထားပေမယ့် စပါးက တစ်ခါမာရှယ်ကို ခေါ်ဖို့ အသံထွက်ဖူးတာကြောင့် မာရှယ်+သန်း၁၀၀+ကြယ်ပွင့်နောက်တစ်ယောက် နဲ့ ကိန်းကို အပြောင်းအရွေ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ စပါးက ကြံရွယ်ပုံရပါတယ်။
ယူနိက်တက်အနေနဲ့ကလည်း ဆန်ချိုလို ပေါင် ၇၃သန်းတန်ကို ၄နှစ်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးကာမှ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ဆန်မရှိအစားကြီးသလိုဖြစ်နေတဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့် ကိန်းကိစ္စကိုတော့ နှုတ်ဆိတ်နေပါတယ်။
စပါးအသင်းဘက်က ကိန်းကို ပေါင်သန်း ၁၅၀အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီး စပါးအသင်းဥက္ကဌအနေနဲ့ ကိန်းကို မန်စီးတီးထက် မန်ယူကိုသွားစေချင်နေတာဖြစ်တာကြောင့် အပြောင်းအရွေ့အမြန်ဖြစ်မြောက်စေချင်နေလို့ ယူနိက်တက်ဘက်ကို တွန်းအားပေးတယ်လို့ အင်ဆိုက်ဒါမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ယူနိက်တက်အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်သတင်းကိုမှကိုးကားစရာမလိုပဲ တွေးကြည့်တာနဲ့ ကိန်းကိစ္စက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိသာနေပါတယ်။
ယူနိက်တက်မှာကိန်းလိုတိုက်စစ်မှူးလိုနေတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို လက်ရှိတိုက်စစ်မှူးကာဗာနီဟာ ဆေးမြီးတို သဘောမျိုးသာဖြစ်နေလို့ပါပဲဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အထောင်တိုက်စစ်တစ်ယောက်လိုအပ်နေတာအမှန်ဖြစ်လို့ ကိန်းလိုတိုက်စစ်ကလိုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိန်းအစားနောက်နှစ်မှာ မန်ယူရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ ဟာလန်းလိုလူငယ်ကစားသမားမျိုးကို ရေရှည်အတွက်ပိုကောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆို‌တော့လက်ရှိ ကွင်းလယ်လိုအပ်ချက်အတွက် ပေါ့ဘာနဲ့လည်းကိစ္စမပီးသလိုပေါင် ၃၅သန်းတန်ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်နဲ့တင်လည်နေတာမို့ စပါးရဲ့အကြံအကြီးကြီးက ဖြစ်မြောက်လာမယ်တော့မထင်ပါ။ မန်ဖန်တွေကရော စပါးကကိန်းကို အလိုရှိပါသလား? သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ကြိုဆိုပါသလား? ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ?